UMchunu nevangeli lamakhondomu | Isolezwe
UMchunu nevangeli lamakhondomu
Isolezwe / 28 January 2013, 10:26am / MHLENGI SHANGASE
BAFUNA amakhondomu asatshalaliswe ezikoleni zamabanga aphezulu ukuzama ukunciphisa isibalo sokukhulelwa kwabafundi.
UKUKHULELWA kwabafundi abangu-10 595 ngo-2011 ezikoleni zaKwaZulu-Natal sekwenze uNgqongqoshe wezeMfundo wanquma ukuthi amakhondomu asatshalaliswe ezikoleni.
UMnuz Senzo Mchunu, umemezele ukuthi amakhondomu awasatshalaliswe ezikoleni zamabanga aphezulu angalokothwa kwezamabanga aphansi.
Uthe akafuni ukuthi abafundi bamabanga aphansi okusuke kukhona kubona noGrade R okungabafundi abaneminyaka emihlanu ukuthi bangaphatha amakhondomu.
“Ekhaya ngeke uyivumele ingane yakho encane ukuthi iphathe amakhondomu ngakho nathi akumele senze izinto esingeke savuma ukuthi zenzeke emakhaya. Awasatshalaliswe emabangeni aphezulu kodwa hhayi kwaphansi. Noma kungathiwa nguMnyango ofuna ukuwaletha kwaphansi, abazali abashaye phansi ngonyawo bakuvimbe lokhu,” kusho uMchunu.
UMchunu ukusho lokhu ekhuluma engqungqutheleni yezinsuku ezimbili ebihlelwe nguMnyango ebibheka izinkinga ezibhekene nemiphakathi ehlukene okubalwa izidakamizwa, ukukhulelwa kwabafundi nezinye.
Usho lokhu nje kwake kwaba nemvunge nokungaboni ngaso linye phakathi kukaNgqongqoshe weMfundo eyisiSekelo uNkk Angie Motshekga, nozakwabo wezeMpilo uDkt Aaron Motsoaledi ngalolu daba njengoba owezempilo wawufuqa lo mkhankaso kodwa owezemfundo uthi awuboni kahle.
Yize isibalo sokukhulelwa kwabafundi ngo-2011 sehlile kunaleso sika-2010 okwakhulelwa abafundi abangu-13 725, kodwa ngokukaMchunu lezi zibalo zisephezulu kakhulu.
Isifunda esisahamba phambili ngokukhulelwa kwabafundi yi-Vryheid ngo-1 752, silandelwe uThungulu ngo-1 382 kube uGu ngo-1 030.
“Noma kungathiwa izibalo zehle ngo-3 000 leso sibalo sisasikhathaza ngoba sincane kakhulu kusadingeka kwenziwe okuningi ngoba sifuna ukufinyelela lapho kungakhulelwa mfundi KwaZulu-Natal. Abafundi abayeke ukuqoma abantu abadala bayeke nokuqoma othisha,” kusho uMchunu.
Isikhulu esiphezulu somkhandlu olawula othisha, iSouth African Council for Educators, uMnuz Rej Brijraj, sithe usaqhubeka lo mkhuba wothisha abalala nabafundi.
Uthe babalelwa ku-50 ababasula ohlwini lokufundisa minyaka yonke abangeke baphinde bakwazi ukufundisa ngamacala athinta ukulala nabafundi.
“Othisha abalala nabafundi baphakathi kweminyaka ebheke ku-30 no-40 ngakho ngabantu abasuke bazi ukuthi benzani. Asisho kodwa ukuthi baningi othisha abazihloniphayo, nabangakwenzi lokhu ngakho angeke sithi bonke bayakwenza lokhu,” kusho uBrijraj.
Uthe izikhathi zokuthi othisha bathole amakhosikazi ezikoleni zaphela kudala, manje abasineki bayabasula nje ohlwini uma bebathole benecala.
“Othisha ikakhulu kudala babethi amakhosikazi abo bawathola esikoleni, ngiye ngithi leso sikhathi sesaphela. Thandana nje nomfundi unguthisha uzozibona ukuthi ufana nobani. Imiphakathi ayisibikele ngoba siyazi maningi amacala afuze lawa esingawazi siwumkhandlu,” kusho uBrijraj.
Kule ngqungquthela bekukhona noNgqongqoshe wezobuCiko, amaSiko nezeMidlalo, uNkk Ntombikayise Sibhidla-Saphetha nowezeNhlalakahle uNkk Weziwe Thusi.
Iziphakamiso zizokwethulwa kwiKhabhinethi ngoFebhuwari 19.